Ho An’ireo Venezoeliana, Masoandro Miposaka Ahitàna Asa Ny Sisintany Breziliana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Mey 2015 13:30 GMT
Ao amin'ny sisintny iraisana amin'i Brezila. Sary avy amin'ny kaonty Flickr barloventomagico. CC BY-NC-ND 2.0
Nivoaka voalohany tao amin'ny bilaogy Las Crónicas de la Frontera ity lahatsoratra ity
Tsy nosainin'i Vicner, Raquel sy Eva velively hoe mety hiasa hitady fivelomana any ivelanyno niafaràn'izy ireo. Saingy satria mitombo ny vintana, dia nanao kajikajy ry zareo ary nandeha niampita sisintany mba hiasa sy hitady vola any amin'ny ‘reais’ Breziliana.
Tamin'ny fotoana nanoratana ity lahatsoratra ity, ny sandan-ny fanakalozam-bola teo amin'ny tsena dia 55 bolivara boliviana n y 1 reais, na dia 2,9 bolivara aza ny 1 reais eo amin'ny fifanakalozana ara-dalàna.
Tsy midika izany fa hoe mpifindra monina ry Vicner, Raquel ary Eva. Tsy misy mipetraka any Brezila na iray aza ry zareo. Miasa, mihinana ary matory any ry zareo mandra-pandrainy karama, ary rehefa miverina mody any Santa Elena de Uairen ao Venezoela, mba hanakalo ny vola sy hampiasa izany hividianana izay ilain-dry zareo sy ny fianakaviany vidiana.
Vicner, nisaraka tamin'ny vadiny ary niteraka roavavy, dia nitady asa tany am-piandohan'ny taona, raha sendra nandalo tao an-tranony ny namany iray nanontany azy raha toa izy ka maniry ny hiasa aminà trano fisakafoanana iray ao an-tanànan'i Villa Pacaraima, any ampitan'ny sisintany iraisana amin'i Brezila. Tsy lavitra fa eo ampitan'ilay arabe feno mpivarotra ao an-tanàna no miasa izy.
Pacaraima, fantatra koa amin'ny hoe BV8 na La Línea (ny Sisintany), no tanàna akaiky indrindra an'i Venezoela, ahitàna olona eo amin'ny 5.000, ny ankamaroany dia mpiasam-panjakana, tantsaha na mpivarotra.
Niroborobo teo anelanelan'ny 1990 sy 2005 i BV8, raha manome vàhana kosa ireo Venezoaliana ny fanakalozana vola, ireo Venezoeliana izay mividy vokatra toy ny saosisy Breziliana, ankosotra fanatsaràna endrika, hamacs st satroka, kapakapa Havaianas ary T-shirts misy sarin'ny sainam-pirenena Breziliana. Tamin'izany andro izany, ny Breziliana no te-ho any Boa Vista sy ireo toerana hafa ao amin'ny fanjakàn'ny Roraima mba hiasa any Santa Elena, any ampitan'ny sisintany iraisany amin'i Venezoelà.
Manana maripahaizana ambony momba ny teknikan'ny fahadiovana sy ny aroloza indostrialy azony teny amin'ny anjerimanontolo i Vicner. Saingy tsy nanohy ny asany velively izy. Mahavita mandray 8.000 hatramin'ny 9.000 bolivars isam-bolana ireo nalmany tany amin'ny anjerimanontolo (eo amin'ny roa dolara amerikana eo). Indray mandeha izy niasa taminà fivarotam-panafody, mpivarotra, nandray ny karama voafetra ho farany ambany indrindra. Sady vady no reny tamin'ny fotoanany manontolo izy tamin'izany.
Tamin'ity tolakandro ity, toy ny nataony tamin'ny iray volana sy tapany, amin'ny dimy izy no hanomboka hiasa. Miaraka amin'ny volony voafatotra sy nosatrohana eny antampon-doha, hanasa tànana izy ary hikarakara handroso sakafo hariva hatramin'ny 25 isa.
Na dia manana trano fisakafoanana aza ny reniny, rehefa nanan-tokantrano izy dia tsy nahay nanendy atody akory. Izao, manamboatra mofo voasesika (burgers) izy, ary sakafo karakarain'ilay toeram-pisakafoana ihany, vary sy voamaina, hena, paty sy salady. Nianatra nahandro tsy dia nila loatra fangarony betsaka izy. Skafo tsotra no tian-dry zareo Breziliana , hoy izy.
Eo amin'ny 10 ora alina eo, handamindamina izy, hanadio ary handao ny toeram-piasàna vonona hiatrika indray ny ampitso. Amin'ny 11 izy no hirava.
Miasa mandritry ny herinandro izy, ary tsy mbola mahafantatra akory hoe rahoviana no ho anjara andro fialantsasatra ho azy. Niasa isanandro izy tamin'iny iray volana sy tapany iny, tsy nahazo na andro iray hialàna sasatra aza. Mandray eo amin'ny 700 reais eo ( 235 dolara amerikana any ho any) miampy efitrano sy sakafo.
Miomana ny ho any Santa Elena izy rahampitso maraina, 15 kilaometatra miala eo, mba handany fotoana miaraka amin'ireo zanany vavy sy hahandro ho azy ireo. 5 sy 11 taona izy roa ireo, miara-monina amin'ny renibeny satria ao Pacaraima dia miha-sarotra ny mahita toerana any an-tsekoly ho an'ireo Venezoeliana. Mora izany taloha — mis eo amin'ny manodidina ny 200 eo ireo ankizy Venezoeliana mianatra ao BV8 — fa ankehitriny ireo izay maniry ny hahazo toerana dia mila manoratra ny anarany ao anaty lisitra fiandry ary miezaka ny hahazo fahazoan-dàlana ho an'ny mpianatra. Mety ho afaka hanoratra azy ireo ihany i Vicner amin'ny 2016.
“Reko fa misy sasantsasany amin'ireo Venezoelian ano mitaraina amin'ny fomba fitondra azzy ireo, fa izaho kosa tsy nanana olana (…) Falu aho eto, tiako ny zavatra ataoko ary tiako ny rivotra iainana. Tiako ny toetrandro, mahafnaritra ny olona ary tsy ratsy ny karama.” Mahazo eo amin'ny 40.000 bolivara eo ry zareo, tsy misy fandaniana atao.
Tao anatin'ny enina herinandro, nifanena taminà Venezoeliana efatra hafa izy taminà toe-draharaha tsy misy hafa tamin'izany: tovovavy iray miasa aminà magazay fivarotana akanjo, izay mandray 500 reais ( 170 dolara) eo isam-bolana ary miasa tapak'andro; lehilahy iray manao asàn'ny mpandray vola aminà toeram-pivarotana lehibe ary mandray eo amin'ny 1.000 reais (manodidina ny 340 dolara), miasa tontolo andro, miampy vehivavy iray miasa aminà toerana mpikarakara endrika amam-bika. “Nolazain'ilay bandy ahy fa avy any Valencia izy (tanàna iray any avaratr'i Venezoela) noho ny tsy fahampian'ny fandriampahalemana sy ny tsy fanànany asa ihany koa.”
Nanomboka ny 1 Janoary 2015, 788 reias (eo amin'ny 330 dolara eo) ny karama farany ambany ao Brezila. Tsy maintsy mandray 27,27 reias raha kely indrindra amin'ny asa ataony isanandro ny olona iray, na 3,58 isan'ora.
Tamin'ny 2003, nametraka fepetra henjana sy manahirana i Venezoela momba ny fanakalozana vola. Amin'izao fotoana izao, manana snda-pîfanakalozana miisa efatra izy, ny telo amin'ireo dia fehezin”ny fanjakana, any ny fahaefatra dia ny sanda malalaka ho fanakalozana ny dolara.
‘Mety amiko ny miasa eto’
Mifandimby i Raquel sy Eva mikarakara ramatoabe efa antitra ao Boa Vista, renivohitr'ilay fanjakàna Brezilaina ao Roraima,izay tanàna iray misy mponina eo amin'ny 350.000 eo, any amin'ny 220 kilaometatra miala an'i Santa Elena.
Amin'izao ora itenenana izao, dia i Eva no miasa raha i Rachel kosa nody any Santa Elena.
Androany, hifoha amin'ny 6 maraina i Eva, hanampy ilay ramatoa hiala ao am-pandriana sy hisasa, avy eo izy hikarakara kafe misy ronono ary mofo ho sakafo maraina. Hiaraka handany ny maraina tontolo izy ireo. Azo antoka fa hikarakara handamin-trano i Eva; hanao sakafo antoandro, hanendy trondro avy nojonoina, akoho sy nofon-kena, vary, salady sy ranom-boankazo; avy eo zareo miaraka mitsotsotra maka aina; avy eo indray mifoha sy mandany andro miresaka; hikarakara ny sakafo hariva indray i Eva, angamba hahandro lasopy legioma, ary farany dia hanampy ilay ramatoa indray hiverina any am-pandriana.
“Mahazo aina tsara aho ao Boa Vista, tsy mila mandoa hofantrano na sakafo. Ary miaraka amin'ny toe-draharaha sarotra iainanay any Venezoela, izay tsy mahatratra faran'ny volana akory ny karaman'ny olona, mety amiko ny miasa eto. Tsy mandany vola aho rehefa miasa aty Brezila. Ny mpampiasa ahy, alohany hatramin'ny saran-dàlako mivezivezy mihitsy aza, ary tamin'ny Desambra dia nomeny aknajo vaovao aho ho ahy,” hoy i Rachel.
Isam-bolana, mandray 1.000 reias i Rachel ( 350 dolara eo ho eo), na dia fantany aza fa mitaky manodidina ny 50 reias eo 5eo amin'ny 18 dolara) isan'ora ny vehivavy Breziliana iray miasa manomboka amin'ny 8 maraina hatramin'ny 2 ora tolakandro.
Ny faharoa nandehanany fitateram-bahoaka avy ao Pacaraima ho any Boa Vista, nifanena taminà tovovay iray avy any Maracay izy, avy any amin'ny fanjakàn'i Aragua ao Venezoela izay any amin'ny 1.500 kilaometatra eo ho eo miala ny sisintany. Nolazain'ilay tovovavy fa nanana dadatoa niasa tao amin'ny seranam-piaramanidina ao Santa Elena izy ary io no nampifandray azy tamin'ny tomponà toeram-pivarotana sakafo tao Boa Vista. Mandray 700 reais (250 dolara) isam-bolana izy.
Soto, matianina amin'ny fiangaliana mozika, mandeha mankao Boa Vista isaky ny misy trano filanonana amin'ny alina manakaràma azy. Anakaraman-dry zareo azy ny fampisehoana, iantohana ny sakafo, ny trano sy ny fitaterana. Ao anatin'ny alina iray dia mandray eo anelanelan'ny 200 sy 300 reais eo izy (80 hatramin'ny 100 dolara). Esoin'ny olona amin'io tontalim-bola io izy amin'ny fitenenana aminy hoe herinandro roa ihany no hiainan'ny olona amin'izany ao Venezoela.
“Nihaona taminà mpiasa maro manana traikefa aho, mpanefy, mpanao trano, izay miasa aty. Miampita sisintany mandra-pahatapitry ny fifanarahany izy ireny dia miverina mody,” hoy izy.
Ao amin'ny foiben-toerany ao Pacaraima, ny Polisy Federaly Breziliana dia matetika no hentitra rehefa manara-maso ny fidiran'ny vahiny. Raha ny mahazatra, 30 andro no fahazoan-dàlana mitoetra omen-dry zareo, tsy tafiditra ao anatin'io ny zo hiasa. Mila mandoa lamandy ireo taorian'ny andro nahataperan'ny fetra nomena azy vao niala tany — amin'ny vola reias Breziliana.